Muqdisho: Abuukar Qaad-diid: Qaadku waa gumeysi cusub – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho: Abuukar Qaad-diid: Qaadku waa gumeysi cusub
A warsame 23 April 2015
Muqdisho: Kulan lagu qabtay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu taageeray ololaha la dagaalanka Qaadka ee uu wado Abuukar Cawaale Qaad-diid, waxaana soo qaban qaabiyay kulankaasi Ururka Dhalinyarada Gobolka Banaadir.
Kulanka waxaa ka qeyb galay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Gobolka Banaadir, Dhalinyaro, haween, iyo marti sharaf kale.
Guddoomiyaha ururka Dhalinyarada Gobolka Banaadir C/kaafi Maxamuud Makaraan oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan ololaha la dagaalanka qaadka, islamarkaana ay la shaqeynayaan Abuukar Cawaale oo u istaagay Joojinta Qaadka, waxaana dhinaca kale uu ka sheekeeyay dhibaatada Dadka Soomaaliyeed uu ku hayo qaadka.
Guddoomiyaha Degmada Boondheere ee Gobolka Banaadir, Qaasim Cabdulle Xasan oo isna ka hadlay kulanka ayaa xusay in ay soo dhaweynayaan ololaha la dagaalanka qaadka islamarkaana Degmada Boondheere ay ka hirgalinayaan barnaamijyo lagu wacyi galinayo bulshada qeybaheeda kale duwan.
Abuular Cawaale Qaad-diid oo mudooyinkanba ku mashquulsanaa la dagaalanka qaadka iyo sida bulshada looga wacyi galin lahaa, kana yimir dalka Britain oo isna hadal ka jeediyay halkaasi ayaa ka sheekeeyay dhibaatada xaga maskaxda ah iyo mida dhaqaale uu ku leeyahay Shaqsiga qaadka cuna.
Abuukar Qaad-diid ayaa sheegay in qaadka uu yahay Gumeysi casri ah oo hantida dadka Soomaaliyeed lagu guranayo, waxaana tusaale uu u soo qaatay wadamada dariska ah in uu ka baxo qaadka haddana aysan cunin dadkooda laakiin ganacsi ahaan ay u keenaan dalka islamarkaana dalkooda ay ku dhistaan malaayiinta Dolar ay Soomaaliya ka faa’idaan.
Guddoomiye ku xigeenka arrimaha Bulshada ee maamulka gobolka Banaadir, Iimaan Nuur Iikar ayaa ku guubaabiyay Dadka Soomaaliyeed in ay ka qeyb qaataan joojinta Qaadka oo muhiimad gaar ah u leh Qoysaska Soomaaliyeed.
Olole dheer ayuu Abuukar Cawaale ka sameeyey dalka UK oo ah halka uu deganyahay, waxaana markii dambe dalkaas laga mamnuucay qaadka oo looga dhoofin jiray dhanka dalka Kenya.
Abukar Qaad-diid ayaa horay usoo maraya deegaanada Puntland iyo Somaliland, inkastoo uu sheegay in saacado kooban lagu xiray Somaliland.
Hogaamiyaasha Midowga Yurub oo ka shiraya qulqulka tahriibka
Baarlamanka oo $300 kun dollar ku yaboohay soo celinta qaxootiga Yemen